Tiffany dia ao amin'ny fandaharam-potoana fitsangatsanganana 2020
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tiffany dia ao amin'ny fandaharam-potoana fitsangatsanganana 2020
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny drafitra fitsangatsanganana iraisam-pirenena ho an'ny taona 2020 dia misy fitsidihana ny rehetra Fivarotana Tiffany eto ambonin'ny planeta. Ity dia ho dia mahaliana tokoa, satria hatramin'ny 2018, dia nisy fivarotana 321 manerantany niaraka tamin'ny 93 tany Etazonia ary 228 tany amin'ny tontolo hafa, anisan'izany ny UK, France, Spain, Ireland, Australia, Colombia, Brazil, Malezia, Costa Rica, Sina ary Japon.
Amin'ny taona 2018, ny varotra net an'ny Tiffany & Co. mitentina 4.44 miliara dolara amerikana, tafakatra 4.17 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny taona 2017. Fantatra amin'ny firavany, Tiffany koa dia mpametraka fofona amin'ny fofona manitra, fitaovana latabatra, kojakoja ary entana lafo vidy hafa.
Tiffany dia vao haingana no nahazoan'ny vondrona frantsay LVMH lafo $ 16.2 miliara, niditra tamin'ny marika malaza hafa toa an'i Louis Vuitton, Christian Dior, ary Bulgari. Tiffany dia miroso mankany amin'ny demografika tanora kokoa mifantoka amin'ireo mpiantsena nomerika, ary ny paosin'ny LVMH dia mety hanamaivana ity dian'ny marketing vaovao ity. Vokatry ny fahazoana dia nitombo mihoatra ny 6 isan-jato ny varotra Tiffany tamin'ny varotra tany New York ary nitombo 2 isan-jato ny LVMH tany Paris.
Ny LVH dia tarihin'ilay mpanapitrisa Bernard Arnault izay mahita fa ny fividianana Tiffany dia hanatsara ny toerany amin'ny firavaka avo lenta, ary ny tsenan'i Etazonia dia hahatonga ny orinasa hifaninana bebe kokoa amin'ny tompon'ny Gucci Kering Group sy ny tompon'ny Cartier Richemont SA. Shina koa dia ao anatin'ny ho avy Tiffany, miaraka amin'ny drafitra hampiakarana ny dian'i Tiffany amin'ity faritra amin'ny tontolo aziatika ity.
Lisitry ny siny nohavaozina
Tsy fanapahan-kevitra mora ny fanapahan-kevitra raisiko momba ny laminasa any Tiffany. Manao tatitra momba ny harena tsara tarehy maro aho, manomboka amin'ny fanaka sy ny fitaovana, hatramin'ny firavaka sy ny lamaody, avy amin'ny trano fandraisam-bahiny ka hatrany amin'ny BnB manerana an'i Etazonia sy ireo toerana iraisam-pirenena; na izany aza, ny fiantsenana dia matetika amin'ireo antony 5 ambony fivelaran'ny olona, ​​ka ny fametrahana an'i Tiffany & Co eo an-tampon'ny lisitry ny zavatra tokony hataoko dia toa tena azo ampiharina.
Tamin'ny fety champagne Tiffany farany teo izay nanentanana ny vahiny hivezivezy teny amin'ny lalantsara amin'ny gorodona roa, makà fotoana hijerena am-pitiavana ireo "zavatra" tsara tarehy mihidy ao ambadiky ny kaontera fitaratra mazava, ary ireo mpivarotra dia dodona hizara tantara momba ny zava-drehetra avy amin'ny alika mpiady amin'ny môtô - hitako fa ny zavatra rehetra tao Tiffany dia nanana tantara ary amin'ny maha-mpianatra mahay dia maniry ny hianatra aho. Rehefa nikasika moramora ilay moto Tiffany Robin Egg Blue aho dia nanapa-kevitra fa raha tsy afaka mipetraka any Tiffany aho dia afaka mitsidika ny magazay rehetra farafaharatsiny. Ny fiainana ao amin'ny Tiffany & Co dia miresaka momba ny “hatsarana”.
Ny làlana mankalaza an'i Tiffany sy manankarena dia natomboka tamin'ny 1837 avy amin'ny mpandraharaha 25 taona Charles Lewis Tiffany sy John B. Young. Noho ny talenta ara-javakanto sy ara-barotra nataon'i Louis Comfort Tiffany ary vola mialoha $ 1,000 avy amin'ny rain'i Tiffany, dia natomboka ho "emploière d'exploitation et des bonneaux" ilay orinasa niasa tamin'i Tiffany, Young ary Ellis.
Amin'ny maha mpandraharaha marani-tsaina azy, i Tiffany dia azo isaina amin'ny fanarahana ny dian'ny Palmer's London Bridge (1750), nametraka ny hevitra momba ny vidiny raikitra ary manamarika ny vidiny mivantana amin'ny varotra mankany amin'ny ala mikitroka. Amin'ny maha-mpanatanteraka orin'asa mafy orina azy dia tsy nanome voninahitra na iza na iza izy.
Tamin'ny 1845, nifindra tao amin'ny katalaogin'ny filaharana mailaka i Tiffany, (fametrahana ny fananana ny loko Robin Egg Blue, PMS - Pantone Matching System No. 1837), ary mitohy ny famoahana ny boky isan-taona. Ny fivarotana NY voalohany (1870) dia hita tao amin'ny 15 Union Square West. John Kellum no namolavola azy tamin'ny vidiny 500,000 19 $ US ary nofaritana ho "lapan'ny firavaka" (NY Times). Nahazo ny toerany teo amin'ny tantara ny orinasa tamin'ny famatsiana sabatra, saina ary fitaovana fandidiana ho an'ny Tafika Union. Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-1878, i Tiffany no orinasa amerikana voalohany nahazo loka tamin'ny fahaizany tamin'ny volafotsy tao amin'ny Exposition Universelle any Paris ary medaly volamena ho an'ny firavaka (XNUMX).
Tiffany no orinasa amerikana voalohany nampiasa ny fenitra volafotsy anglisy (92 isan-jato madio) ary ny studio volafotsy Tiffany no sekoly famolavolana amerikana voalohany notarihin'i Edward C. Moore, mpanefy volafotsy malaza. Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19, ny orinasa dia lasa mpanefy volafotsy voalohany ary manadio firavaka sy famantaranandro. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, i Tiffany dia nanana mpiasa sy sampana maherin'ny 1,000 tany Londres, Paris ary Genève. Ny magazay lehibe any New York eo amin'ny zoron'ny Fifth Avenue sy ny 57th Street, dia nosokafana tamin'ny 1940, ary io fivarotana io no toerana misy ny sarimihetsika anisan'izany ny Breakfast in Tiffany's, starring Audrey Hepburn, and Sweet Home Alabama, starring Reese Witherspoon.
Ny filoha Lincoln dia nividy suite voahangy voa ho an'ny vadiny, Mary Todd Lincoln, tamin'ny 1861, ary ny tanora Franklin Roosevelt nividy peratra fifamofoana Tiffany tamin'ny 1904. Tamin'ny 1956, ny mpamorona fanta-daza, Jean Schlumberger, dia nanatevin-daharana an'i Tiffany, ary izy no mpamorona voalohany navela hanao sonia ny asany. Tamin'ny 1958, izy no mpamorona firavaka voalohany nahazo ny loka Coty an'ny lamaody. Nijanona tao Tiffany & Co izy mandra-piveriny nisotro ronono tamin'ny taona 1970.
Tamin'ny 1956, Andy Warhol dia niara-niasa tamin'ny orinasa hamorona karatra krisimasy Tiffany ary navoaka ny karatra hatramin'ny 1962. Lady Bird Johnson (1968), ny Lady First of the US (tamin'izany fotoana izany) dia nanendry an'i Tiffany hamolavola serivisy White House china-service misy voninkazo 90.
Ny mpikambana ambony ao amin'ny fiarahamonina amerikana dia ny mpanaraka an'i Tiffany, ao anatin'izany ny Vanderbilts, Astors, Whitneys ary Havemeyers - izy rehetra dia nitondra diamondra Tiffany ary naniraka ny orinasa hamokatra serivisy volamena sy volafotsy. Ny firavaka Tiffany dia nitafian'i Jacquelin Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, ary Diana Vreeland.
Tiffany & Co. dia tsy hita eo an-tampon'ny lisitry ny orinasa maharitra na dia teo am-piandohana aza izy tamin'ny ezaka nataony mba hialana amin'ny fanararaotana ny famatsiana firavaka, ao anatin'izany ny fanarahan-dia ny akora, ny fandraisana anjara amin'ny ezaka fiarovana ny zon'olombelona ary ny fanamafisana ny fanamafisana. fenitra manerantany.
Anisa Kamodoli Costa dia filoha sy filohan'ny The Tiffany & Co. Foundation ary Lehiben'ny Office Sustainability ary nitarika ny ezaka hanatsarana ny mangarahara, hampihatra ny fenitra hividianana metaly sarobidy.
Tiffany ho an'ny taona 2020
Amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny fotoana maharatsy, dia niaiky i Tiffany fa zava-dehibe ny fitazonana ny sarin'ny rendrarendra, fomba ambony ary hatsarana. Hatramin'ny 26 Novambra 2019, ny varotra dia nivarotra mihoatra ny vidin'ny fihenan'ny US $ 122.56 ka hatramin'ny US $ 129.72 tao anatin'ny iray volana lasa izay. Zack dia nanome naoty ny orinasa # 3 (Hold). Tsy mahalala olona tsy te “hihazona” boaty Robin Egg Blue Tiffany aho!
Vitsy amin'ireo zavatra tiako indrindra amin'ny dia sy fialantsasatra
Tiffany valizy. Mandehandeha amin'ny rivotra, lamasinina, na fiara.
Moto Tiffany. Tonga lafatra ho an'ny dia an-dalambe sy eny ambanivohitra.
Tiffany ho an'ny Bow Wow. Ny alika kely rehetra dia mendrika an'i Tiffany.
Kitapo sy kojakoja Tiffany. Ho an'ny asa sy fialamboly.
Tiffany Tenisy ambony latabatra. Mila fanatanjahan-tena ny tsirairay.
Tiffany Jewels. Manao fanambarana.
Tiffany @ Noely.
Tiffany hisakafo. Na ny fakana an-tsokosoko dia tsara kokoa amin'ny Tiffany.